Ukuguqula - K-Tek Machining Co., Ltd.
Kuyini ukuphenduka kwe-CNC?
I-CNC lathe iyithuluzi lomshini elisebenza ngokunemba okuphezulu, elisebenza kahle. Ifakwe i-multi-station turret noma i-power turret, ithuluzi lomshini linezinhlobonhlobo zobuchwepheshe bokucubungula, lingacubungula amasilinda aqondile, amasilinda adayagonal, ama-arcs kanye nezinto zokusebenza eziyinkimbinkimbi ezahlukahlukene ezinjengezintambo nemisele, enezingqimba ezihlanganisiwe kanye nokuhlanganiswa okuyindilinga.
Ekuguqukeni kwe-CNC, imigoqo yempahla ibanjelwe ku-chuck futhi ijikelezwe, futhi ithuluzi londliwa ngama-engeli ahlukahlukene, futhi izinhlobo eziningi zamathuluzi zingasetshenziswa ukwakha isimo osifunayo. Lapho isikhungo sinemisebenzi yokuguqula nokugaya, ungamisa ukujikeleza ukuvumela ukugaywa kwezinye izinhlobo. Lobu buchwepheshe buvumela izinhlobo ezahlukahlukene, osayizi nezinhlobo zezinto ezibonakalayo.
Amathuluzi we-CNC lathe kanye nendawo yokuphendulela ifakwe ku-turret. Sisebenzisa isilawuli se-CNC ngethuluzi "lesikhathi sangempela" (isib. Insizakalo Yamavulandlela), nayo emisa ukujikeleza futhi ingeze eminye imisebenzi efana nokubhola, imisele nezindawo zokugaya.
Uma udinga ukujika kwe-CNC, singabanye babakhiqizi abanekhono futhi abanokuncintisana kakhulu, ithimba lethu lingakhiqiza izimpahla ngokunembile nangesikhathi. Ububanzi obubanzi bamakhono wokukhiqiza avumela i-K-Tek ukuthi inikeze izingxenye zesampula ezihlukile. Imishini yethu yokukhiqiza ngobuningi iqinisekisa ukuguquguquka nokuzethemba kwethu. Futhi sizohlangabezana nezidingo zayo yonke imboni esiyisebenzisayo ngamazinga alinganayo anele. Sigxila kwikhwalithi nesevisi yamakhasimende.
Izingxenye zokuguqula ze-CNC esizenzayo
Sikhiqize izingxenye ezahlukahlukene ze-CNC zokujika eminyakeni eyi-10 futhi ithimba lethu lobunjiniyela belilokhu linikeze amakhasimende ethu izixazululo eziwusizo zokuxazulula izinkinga zawo ekukhiqizeni izingxenye zokujika ze-CNC. Siqinisekisa imishini yekhwalithi ephezulu ngokungaguquguquki, noma ngabe kwenzeka ezingxenyeni eziyinkimbinkimbi, sisebenzisa amamojula womshini onzima futhi sisebenzisa ikhono le-CNC elinamakhono ukusebenzisa umshini.
Machining Option Ngo CNC Turning
Ngemishini yethu yokusebenza yakamuva nephezulu equkethe izikhungo zokujika ze-CNC nemishini yokujika eyi-6-axis. Sinikeza izinketho ezahlukahlukene zokukhiqiza. Noma ngabe izingxenye ezilula noma eziyinkimbinkimbi ziphendukile, izingxenye ezinde noma ezifushane ziphendukile, sihlomele wonke amazinga wobunzima
Prototype machining / zero uchungechunge ukukhiqizwa
Ukukhiqizwa kwe-batch encane
Ukukhiqizwa kwamasayizi aphakathi nendawo
Izinto ezilandelayo eziqinile zivame ukusetshenziswa: i-aluminium, insimbi engagqwali, ithusi, inayiloni, insimbi, i-acetal, i-polycarbonate, i-acrylic, ithusi, i-PTFE, i-titanium, i-ABS, i-PVC, ithusi njll.